Umshini Wokusika we-FIBC Wendwangu, Umshini Wokuhlanza we-FIBC - VYT
Umshini Wokusika we-FIBC Wendwangu
Umshini Wokusika we-FIBC Belt
Umshini Wokuhlanza we-FIBC
Umshini Wokumiswa Kwamabhodlela Webhodlela
Isitsha Liner Bag
Umfutholuketshezi Baling Cindezela
PP nokwelukiweyo isikhwama okwenza umshini
Okuzenzakalelayo Jumbo Izikhwama Yokuhlanza Machin Air umshini ...
Jumbo Isikhwama FIBC Indwangu Cutting Machine CSJ-2200
I-Jumbo Bag Belt ye-webbing FIBC enkulu yesikhwama se-cuttin ...
FIBC PE Film Auto Bottle Umumo Liner ukubekwa uphawu Cu ...
Namuhla, amakhasimende amaningi anelisekile ngekhwalithi nokuthembeka kwezinsizakalo nemikhiqizo yethu. Sizokwenza ngcono izinsizakalo zethu kanye nohla lomkhiqizo ukuze sanelise amakhasimende ethu ngokulandela ubuchwepheshe obusha kanye nezidingo zemakethe.
Ngokusekelwa okuqinile kwezobuchwepheshe, imishini yokucubungula esezingeni eliphakeme, ngesisekelo sesingeniso esiqhubekayo nokumuncwa kobuchwepheshe obuthuthukisiwe bangaphandle, kuhlanganiswe neminyaka eminingi yokuhlangenwe nakho kokukhiqiza, sithuthukise imishini yokukhiqiza yemishini yokwenza izikhwama zejumbo.
Siba yinkampani yesixazululo somshini wesikhwama sejumbo esihloniphekile esine-premium service. "IKhasimende Lensizakalo, Thuthukisa Ndawonye" yisimiso esizinze enhliziyweni yabantu bonke. Ngokuqondiswa komgomo, sithola ukuqashelwa okubanzi ngamakhasimende ethu aphesheya.
Sithumela imikhiqizo yethu emazweni angaphezu kuka-50 nasezindaweni ezinjengeMpumalanga Ephakathi, iRussia, i-Southeast Asia ne-Afrika. Imikhiqizo yethu kanye nezinsizakalo zijabulela idumela elihle emhlabeni wonke.
I-Xuzhou VYT Machinery and Technology Co, Ltd. kuhloswe ngayo ukuthuthukisa nokwenza yonke imishini ehlobene ne-FIBC, eyenzelwe ngokukhethekile futhi yakhelwe imishini yokuqedela ye-FIBC nangemuva. Besilokhu senza imishini yokukhiqiza i-FIBC iminyaka eminingi, umshini we-VYT uhlinzeka ngezinsizakalo kumakhasimende ayo, ukuthola izixazululo ezingcono zokumaketha. Namuhla, amaklayenti amaningi emazweni angaphezu kwama-30 kuwo wonke ama-wold anelisekile ngekhwalithi nokuthembeka kwemikhiqizo nezinsizakalo zethu.
I-FIBC isika ucezu olulodwa
Isikhwama sangaphakathi seJumbo
Umsiki webhande le-FIBC
I-FIBC isike ama-cors
Indwangu yokusika ye-Ultrasonic
Namuhla, amakhasimende amaningi emhlabeni wonke, anelisekile ngekhwalithi nokuthembeka kwezinsizakalo nemikhiqizo yethu.
Isingeniso sesikhwama se-container lining
Isitsha liner isikhwama Isitsha ulwelwesi esikhwameni, owaziwa nangokuthi isitsha esomile b ...
Yiziphi izici zomshini wokusika ibhande le-FIBC?
Izici: umshini usebenzisa i-microcomputer yedivayisi yokulawula izinombolo, ukumaka isiShayina nesiNgisi, ...
Indlela yokukhiqiza yomshini wesikhwama sokuhlanza sangaphakathi se-FIBC
Imodeli yokusetshenziswa ingeyensimu yemishini yokulungisa, ngo ...
Ubuchwepheshe obukhona besikhwama sekhonteyina somshini wokusika we-FIBC unezinkinga ezilandelayo
Umshini wokusika we-FIBC waziwa nangokuthi isikhwama sesitsha esiguquguqukayo, isikhwama sethoni, ...
1-1, Isitshalo saseNingizimu, iZhangji Industrial Park, Isifunda saseTongshan, iXuzhou City